Twitter, xubin cusub oo ka tirsan qoyska Linux | Laga soo bilaabo Linux
War farxad leh ayaa maanta ku wareegaya shabakada.
Twitter (in aan loo baahnayn in la sharaxo qofka uu yahay ama waxa uu sameeyo) wuxuu go'aansaday inuu ku biiro Foundation Foundation. Agaasimaha Twitter OpenSource (Chris Aniszczyk) ayaa yidhi:
Linux iyo awooddeeda wax ka beddelka ayaa aasaas u ah kaabayaasha tikniyoolajiyadeed. Adoo ku biiraya Linux Foundation waxaan taageeri karnaa urur muhiim noo ah, oo aan la kaashano beel horumarisa Linux sida ugu dhaqsaha badan Twitter.
Aniszczyk wuxuu na siin karaa faahfaahin dheeraad ah LinuxCon soo socota, inkasta oo shakhsiyan aan aad uga dhiiranahay waxa Twitterku uga qayb qaadan karo Linux arrimaha farsamada, marka loo eego sharciga ama faahfaahinta kale ee ku saabsan ka mid noqoshada (Waxaan ula jeedaa, waxaan rajeynayaa inaan arko tabarucaadka ka imanaya Twitter, aad uma xiiseeyo sababta ay hadda ugu biireen hehe).
Ku xigta Twitter waxaa jira kuwa badan oo waaweyn oo kale oo ka tirsan Linux Foundation.
Halkan xubnaha ugu muhiimsan:
Kuwani waa xubnaha Dahabka:
Ka dibna tiro aad u tiro badan ayaa ka kooban Xubnaha Lacagta, oo ay ka mid yihiin Twitter:
Aniguna waan caddaynayaa, liistadan xubnaha lacagta ah waxaa ku jira kuwa waaweyn sida:
DreamWorks (haa, filimada animation-ka CIA)
Sikastaba, taasi waa war wanaagsan 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Twitter, xubin cusub oo ka tirsan qoyska Linux
Twitter wuxuu galaa Linux Foundation, laakiin qof walba wuxuu u xirayaa API-kiisa, miyaanay ahayn wax iska hor imanaya?
maya, ma ahan wax is burinaya, twitter waa shirkad, oo sida shirkadaha oo dhan waxay raadineysaa danteeda, taas oo ah in ay dalbato wax bilaash ah sida twitter.
Hagaag, wali waan gali karaa API-gaaga.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, isku mid maaha in Linux loo taageero xorriyad ahaan, haddii aanad dareemin in Oracle (oo aan meelna uga xidhnayn MySQL) iyo Nvidia ay yihiin.
By the way, wali waan gali karaa Twitter-ka API, hadii ay xidhaan akoonada API si uun way noqonaysaa maxaa yeelay waxaa jira kuwa u adeegsada ujeedooyin yar yar 'wanaagsan'
Sidii ay ku dhaheen hareeraha, ma ahan wax is burinaya, laakiin si kadis ah waa taas wixii aan ku fikiray markii aan ogaaday ...
JOJO aobe wuxuu ku jiraa aasaaska Linux haha. Iyo RedHat waa xubin lacag ah. Si fiican uma fahmin waxa ku saleysan goobta dahabka dahabka ama platina, tabarucaadka, tabarucaadka aasaaska Linux?
Waan fahansanahay inay kuxirantahay tabarucaada dhaqaale ee tani ay kuleedahay aasaaska iyo laga yaabee xoogaa horumar ah oo ay ku darayaan J, habka aan u maleynayo in dhowr bilood ka hor Samsung ay ku biirtay liiska platinum.
Qofka ugu deeqa badan ayaa kor u kacaya darajada 😉
Sida Vicky dhaho !!!
Si kale haddii loo dhigo, muxuu Oracle u sameeyaa sida platinum iyo OpenSUSE iyo RedHat aysan u joogin (taas oo aanan taageere weyn u ahayn, waan caddaynayaa) ... iyo sidoo kale, ma garanayo haddii ay jiri lahaayeen Debian iyo Arch urur, kuwaas oo ah kuwa kaliya ee maskaxdayda igu soo dhaca, qaar ka mid ah kuwa wax badan ku biiriya oo aan ka ahayn arrintan ... ii caddee: Yaa go'aamiya cidda la sheegay iyo mawqif noocee ah ayuu hayaa? Oo ma ii sheegtaa, haddii ay run ahaantii kaliya khuseyso lacagta aad ku leedahay aasaaska Linux?
Xiiso leh in la falanqeeyo cidda ku lug leh horumarka ... BSD, Indiana, maalin maalmaha ka mid ah waa inaan u soo haajiraa adiga ...
Gaara Gaara !!
Waan ku faraxsanahay in nooc kale soo galo si loo taageero hehehe penguin
Tani waxay dhiirigelinaysaa adeegsiga linux ee shirkadaha dhamaadka aakhirka waxaa jiri doona kuwo kale oo badan oo lagu daro, laakiin ujeedadu waxay noqon doontaa inay bilaabaan inay bilaabaan koodh kale oo bilaash ah sida nvidia oo leh 2 nooc oo wadayaal ah: noveau-ka xorta ah iyo kan xidhan nvidia koodh
openHAB: otomatiga guriga farahaaga